बुद्दलाई उखलेर क्राइस्ट रोप्ने देश :: NepalPlus
बुद्दलाई उखलेर क्राइस्ट रोप्ने देश
गौतम बुद्द नेपालमा जन्मिए । आफ्ना उपदेश बाँड्न चार चौरासी घुमे, हिँडे । विश्वमा अहिले बुद्द धर्म फैलिँदो छ । त्यो सँगै नेपाल देश र हामी नेपालीकोपनि शान र मान चुलिन्छ । अहिंशा, शान्ति, दया, माया र परोपकारको धर्म भनेर चिनिने बुद्द धर्म । उडन्ते गफ र नाटकिय, हावादारी कपनाशिल भन्दा जिवनका ब्यवहारिक पक्ष भएको, सुन्न, सुँघ्न, अनुभुती गर्न, प्रत्यक्ष देख्न र छाम्न पाइने, भोग्न पाइने उक्ति छन् बुद्दका । तर हाम्रो देशका शासक, कठपूतली सरकारका पात्रहरु कस्ता छन् भने आफ्नै देशमा जन्मिएका, आफ्नै बिभूतीको मानमर्दन गरेर बिदेशी धर्म रोप्दै छन् । बुद्दको मूर्ती उखलेर जिसस क्राईस्टका क्रिश्चियन गिर्जाघर रोप्दै छन् देशमा ।
काँक्रे बिहारमा राख्ने भनेर बनाइएको यो बुद्द मूर्तीलाई स्थापना स्थलबाट हटाए । त्यसपछि प्रशासन कार्यालयमा पुर्याए सूर्खेतका सिडियो पुरुषोत्तम कुवँरले । ओंठे जवाफ दिएछन् उनले ‘त्यहाँका कुनै कुनै मान्छेले राख्न दिएनन’ भन्ने । त्यो को हो कुनै कुनै मान्छे ? देशमा कुनै कुनै मान्छेले जे गर्न चाह्यो त्यहि हुन्छ ? राज्य तिनैको पछि लागेर नाजावाफ बनिदिन्छ ? स्थानिय स्तरको शान्ति स्थापना गर्ने काम सिडियोको होइन ? सुन्दापनि कति लाजै लाग्ने, कति आक्रोशित बनाउने कुरा ‘बुद्द मूर्ती प्रशासनका कर्मचारीले दिशा पिसाव गरेर बग्ने सेफ्टी ट्याँकीको ढलानमा सुताइेएछ ।’ ध्यानका लागि, ज्ञान प्राप्तिकालागि स्वच्छ र शान्त ठाउँ खोज्दै हिँडेका गौतम बुद्द के त्यस्तो बिकारि ठाउँमा बस्छन् ? राष्ट्रिय बिभूती, देवी देवता, आस्थाका केन्द्रलाई त्यतिसमम हेप्न मिल्छ ? स्थानिय स्तरको प्रशासन हेर्ने र शान्ति कायम गर्ने, न्याय दिने काम सिडियोको होइन ?
तर जिल्लाका यि हाकिम भैखाएकाहरु चुपचाप बसिदिन्छन् । किनभने यिनलाई बुद्दका मूर्ती संरक्षण गर्नु छैन । यिनलाई बुद्दका मूर्ति संरक्षण गरेर द्रब्य मिल्दैन । हुस्कीका बोत्तल सिरानीमा कसैले ल्याइदिँदैन । जिसस क्राईस्ट र जेहोबाका मूर्ती भित्राउँदा धन दौलत मिल्छ । डलरका बिटा भित्रिन्छ । देश बिदेशको सयर गर्न पाइन्छ । त्यसैले सिडियो सापहरु बुद्दलाइ उखलेर क्राईस्टहरु रोप्ने गर्छन् ।
हाम्रो देशमा अहिले गिर्जा घरहरु तिब्र रुपमा बनेको बन्यै छन् । गाउँ गाउँमा पक्की गिर्जाघर बन्ने क्रम तिब्र छ । बिदेशी रकममा धार्मिक प्रबचन हुन्छ । पश्चिमीहरु गाउँ गाउँ गएर पैसा बाँडेका छन् । गिर्जा घर बनाउन डलर खन्याएका छन् । अहँ सरकारको कुनै निकायले बोल्दैन । जाँचबुझ र नियन्त्रण गर्दैन । त्यस्ता गिर्जा घर बनाउँदा बिरोध गरेको सुनिन्न । किनभने पश्चिमी मुलुकका दलालहरुले गाउँका टाठा बाठालाई मोटो रकम बाँड्छन् । त्यसपछि थोरै रकम गाउँका सोझासाझालाई कलमकापी, फरिया, नुन तेल, राँगाको मासु र चिउरा बाँडेकै भरमा सबैको मुख टालेर गिर्जाघर धमाधम बनाइराखेका छन् । स्थानिय स्तरमा सिडियो सापहरुको तोक आदेशले त्यो देख्दैन । किनकि खल्ति डलरले भरिएको हुन्छ । केन्द्रमा पार्टीजति धेरैजसो बिकिसकेकै छन् । नेता जति धेरैजसो दलाल बनेका छन् । तिनलाई पैसो पाए भयो । अनि कसले रोक्ने गिर्जाघर बनाउने क्रम ? कसले निगरानी गर्ने ? कानुन सममत छ वा छैन हेर्ने ?
हाम्रो संस्क्रिति, पहिचान, सभ्यता, सम्पती, राष्ट्रियता सबैतिर हमला गरिएको छ । त्यसलाई हेर्नुपर्ने काम सरकारको हो । सचेत गराउनुपर्ने काम राजनितिक दल, नेता र सचेत नागरिकको हो । तर अहँ त्यो कहिँ कतै प्रभावकारिरुपमा रुपमा देखिन्न । पश्चिमाहरु मनपरि जान्छन् । घुम्छन् । पर्यटक भिसामै घुमेर गाउँ गाउँमा मन लागेको सबै काम गर्छन् । स्थानिय प्रशासनलाइ निर्देशनसमेत दिएर आफ्नो काम फत्ते गर्छन् ।
अहिलेको अशान्ति, द्वेश, झैझगडा र द्वन्दका बेला झन बुद्दको ज्ञान र उपदेशलाई फैलाउनुपर्ने हो । संसारले श्रद्दा गर्ने हाम्रा बिभुतीको झन बिश्वमा प्रचार गर्नुपर्ने हो । आफ्नै देशमा झन बढि आफ्नै बुद्द धर्मलाई फैलाउनु पर्ने हो । तर जब शासकहरु बिदेशीका दलाल बन्छन् । नेताहरु बिदेशीका एजेन्ट बनिदिन्छन् । स्थानिय प्रशासनसम्म सबै चिज खरिदबिक्रि हुन्छ । माथिल्लो निकायदेखि तल्लो निकाय सम्म जब तिनको स्तर अनुसारको भाउ र दरमा बिकाउ हुन्छन् तब गौतम बुद्दहरु उखालिन्छन् र जिसस क्राईस्टहरु रोपिइन्छन् । अरुको आस्था, बिश्वास, धर्म सबैमाथि बुट बजार्ने काम हुन्छ । बिकेकाहरु मौन बसिदिएर बिदेशी धर्मका अनुयायीहरुको बिउ रोप्ने काम भैरहन्छ । हाम्रा शासकहरुले त्यहि गर्न खोजेका छन्, बुद्दलाई उखल, जिससहरु रोप्दै जाउ ।
यहाँ कुनै धर्मको बिरोध गर्न खोजिएको होइन । बुद्द, इशाई मुस्लिम सबै धर्माक आआफ्नै मान्यता, विश्वास र आस्था छन् । तर ति सबैको आदर हुनुपर्छ । कुनैपनि चिजलाई छाडा छोडिनुहुन्न । आर्थिक लाभ र लोभ देखाएर सोझासाझालाई धर्म परिवर्तन गराउने काम रोकिनुपर्छ । कुनै एक धर्मका अनुयायीको मानमर्दन गरेर, आस्थामा चोट पुर्‍याएर अरुको फैलाउन पाइन्न ।